ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ကြာရှည်ခံ (ခေါ်ခရစ်စမတ်သစ်ပင် "အစာ") နှင့်အတူတူပင်ပါဝင်ပစ္စည်းများဆံ့ပန်းပွင့်ကြာရှည်ဖြတ်: စက်ရုံတစ်ခု acidifier (ခဲယဉ်းရေ alkaline များဖြစ်ပါသည် - ရေကိုပိုပြီးအက်ဆစ်အောင်စက်ရုံရေနှင့်အစားအစာအတွက်ယူကူညီပေးသည်) များအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအရင်းအမြစ်, နှင့်ကြီးထွားလာရာမှမှို, မှိုနှင့်ရေညှိတားဆီးဖို့ပိုးသတ်ဆေး။
4 လက်ဖက်ရည်ဇွန်းသံပုရာဖျော်ရည်သို့မဟုတ်ရှာလကာရည် (optional)
ခရစ္စမတ်သစ်ပင်စားနပ်ရိက္ခာ Make ရန်ကဘယ်လို
အဘယ်အရာကိုမျှ ပို. လွယ်ကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်: အတူတကွပါဝင်ပစ္စည်းများရောမွှေနှင့်ညှပ်ပန်းပွင့်များအတွက်ခရစ္စမတ်သစ်ပင်သို့မဟုတ်ပန်းအိုးများအတွက်အခြေစိုက်စခန်းအတွက်ဖြေရှင်းချက်ကိုစောင့်ရှောက်။ သစ်ပင်များနှင့်ပန်းပွင့်နှစ်ဦးစလုံးကွယ်ပျောက်တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်ကနေအေးဒေသများရှိမဟုတ်တော့ကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။
သစ်ပင်သို့မဟုတ်ပန်းပွင့်ကိုအမြဲ "ရေ" ရှိပါတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ပုံမှန်ပန်းအိုးသို့မဟုတ်သစ်ပင်ထိုင်ရှိရာအခြေစိုက်စခန်း refill ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်တစ်ဦးမှုန်ရေမွှားပုလင်းမှရေနှင့်အတူအခါအားလျော်စွာသစ်ပင်သို့မဟုတ်ပန်းပွင့် spritz လိုပေမည်။
သငျသညျလေးငါးရက်များအတွက်ဖြေရှင်းနည်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ် အခန်းအပူချိန်မှာ တစ်ဦးတံခါးပိတ်ကွန်တိန်နာအတွင်း, သို့မဟုတ်အအေးခန်းနှစ်ပတ်အတွင်း။
မသောက်ပါနဲ့! သငျသညျအလုံအလောက်သစ်ပင်သို့မဟုတ်အောင်အပေါ်အစီအစဉ်ရှိပါက ဖြတ်ပန်းပွင့်ဓါတ် တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့, သင့်ကွန်တိန်နာတံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်ကလေးများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏လက်လှမ်းမမီထဲကစောင့်ရှောက်လော့။
ရောစပ်တဲ့အခါမှာအရောင်ချွတ်အရောင်တင်နှင့်ရှာလကာရည်အဆိပ်သင့်အငွေ့ထုတ်လုပ်ရန်။ သငျသညျရှာလကာရည်သို့မဟုတ်ပေါင်းထည့်လိုလျှင် သံပုရာဖျော်ရည် , အစားအရောင်ချွတ်အရောင်တင်နှင့်အတူတိုက်ရိုက်ရောမွှေထက်ရေကထည့်ပါ။ ဤသူသည်သင်တို့စိုးရိမ်ပူပန်လျှင်, သံပုရာဖျော်ရည်သို့မဟုတ်ရှာလကာရည်မပါဘဲအရောင်ချွတ်အရောင်တင်သုံးစွဲဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။
သငျသညျပြောင်းဖူးရည်မရှိဘူးဆိုရင်ရေအတွက်ဖျက်သိမ်းသကြား4လက်ဖက်ရည်ဇွန်း, အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ ကြေးနီတစ် fungicide နှင့် acidifier အဖွစျဆောငျရှကျနိုငျအောငျအချို့လူများကတစ်သကြားဖြေရှင်းချက်တစ်ခုတစ်ပြားမှထည့်ပါ။
နောက်ထပ်ဘုံ option ကိုအစားပြောင်းဖူးရည်နှင့်သံပုရာဖျော်ရည်, Sprite သို့မဟုတ် 7-Up ကိုကဲ့သို့အက်ဆစ်အပျော့သောက်တစ်လုပ်နိုင်တဲ့အစားထိုးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ရုံအရောင်ချွတ်အရောင်တင်တဲ့မျိုးစုံနှင့်အတူ, ရေတစ်ဂါလံမှ (Non-အစားအသောက်များတွင်) အချိုရည်တစ်ဘူးထည့်ပါ။
1 ကွတ်ထုတ်ယူပြီးရေ, 1/2 က c: ပန်းပွင့်များအတွက်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းစာရွက်ဖြတ်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ ပြောင်းဖူးရည်, 1 Tsp ။ အရောင်ချွတ်အရောင်တင်, 1 Tsp ။ သံပုရာဖျော်ရည်ကို
Gel Air ကိုအမြင်ကြည်လင်စေရန် Make လုပ်နည်း
Fizzy Sherbet Powder Candy ကြော်
သံချေးအစွန်းအထင်း Remove လုပ်နည်း
နို့ကနေ non-အဆိပ်သင့်ကော် Make လုပ်နည်း
Thames & Kosmos Chem 3000 ဓာတုဗေဒ Kit ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အစဉ်အဆက် 10 အကောင်းဆုံးဗိသုကာလက်ဆောင်များ
2006 Jeep Liberty လီမိတက် 4x4 CRD
10 Classic, စစ်မှန်သော New Orleans Mardi Gras သီချင်းများ
15 ခြေလှမ်းများအတွက် EVP နှင့်အတူမှတ်တမ်းဝိညာဉ်အသံ
ဘယ်လို Mensch Be မှ
သင်ကဂေါက်သီး Swing အကူအညီအတွက်ကောင်းသော Balance နှင့် Rhythm 'လြယ္ကူ Swing, Hard Hit' '
အဘယ်ကြောင့်သူ Ming တရုတ်ကရတနာရေယာဉ်စုထဲကပေးပို့ခြင်း Stop ခဲ့သလား
ထူးအိမ်သင်နှင့်သုတစာပေအတွက် motif ဘာတွေလဲ?
Eu သည်အချက်အလက် - Element ကိုအနုမြူနံပါတ် 63
အကောင်းဆုံးဓားနှင့်တတ် Fantasy အယ်
Kuk ရွှံ့ညွန်ထဲက: ပါပူဝါနယူးဂီနီအစောပိုင်းစိုက်ပျိုးရေး
အားလုံးပြင်သစ်သမ်မာကမျြး Un Soupçonအကြောင်း
ကောလိပ်ဆိုင်းငံ့ကာလမှာ, Waitlists နှင့်ပလပ်ကိုငျတှယျဖို့ကိုဘယ်လို
Jorge Luis Borg ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ (1899-1986)